फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - मैले त कुरै बुझिन
मैले त कुरै बुझिन बलदेव महत
‘लौ ज्योतिष बाजे ! मेरो छोराको दिन, दशा र ग्रह हेरिदिनु र्पयो । साह्रै सतायो ।’ ज्योतिष बाजेलाई ढोगेर उनको पिँढीको छेउमा बस्दै मैले भनेँ ।
‘के त्यस्तो नचाहिने काम र्गयो र तिम्रो छोराले ?’ एक हातजति लामो आफ्नो टुप्पी दाहिने हातले खेलाउँदै ज्योतिष बाजेले सोध्नुभयो ।
‘खै के भन्नु बाजे ! आफ्नो आङ कनाएर के छारो उडाउनु । अब तपाईं त आफ्नै मान्छे । तपाईंसित के लुकाउनु । मेरो छिमेकी, वल्ला गाउँ पल्ला गाउँका मान्छेसित सधैँ झैझगडा गरीनै रहन्छ । साँचो कुरो एउटै गर्दैन । बोल्न थालेपछि बोलेको बोल्यै गर्छ । अरूले बोलेको पटक्कै सुन्दैन ।’ एक सासमा बताएँ मैले ।
ज्योतिष बाजे टुप्पी खेलाएर र चिना केलाएर मुसुमुसु हाँसिरहे । केही बोलेनन् अनि नबोल्नुको कारण पनि खोलेनन् । म जिल्ल परेँ । अघिपछि सबै कुरा पटापट भन्थे र सिदा थन्क्याएर बिदा दिइहाल्थे । आज भने निकै गम खाए । बाजेका चाला देखेर आफ्ना गाला राता भइसके, उनी भने घाँटीका माला समेत हल्लने गरी चिनातिर हेरेर मुसुमुसु हाँस्दै टाउको हल्लाउँछन् । निकै बेरसम्म चिना हेरेर बाजेले आनन्द लिएझैँ गरे । खपिनसक्नु जस्तै भयो मलाई चाहिँ।
‘तिम्रो छोराले अरू के–के गर्छ ? बिस्तारमा सुनाउ त ।’ बाजेले बल्ल मुख खोले । यसभन्दा अघि ज्योतिष बाजेले मलाई यति राम्रो भाषामा केही भनेकै थिएनन् । पहिलोपल्ट निकै प्रेमपूूर्वक सम्बोधन गरेपछि मैले पनि सबै कुरा खुलस्त पार्नै र्पयो ।
‘के गर्नु बाजे ! आफ्नो कर्मै उस्तो । एउटा भएको छोराले सुख दिने छाँट छैन । केही किन्न पठायो भने नाफा खाएर हैरान पार्छ । पैसाको कुरा आयो कि कमिसन हिसाव गर्न थालिहाल्छ । पैसा देख्यो कि सासैले टिप्लाजस्तो गर्छ । अरूलाई गफबाहेक केहि दिँदैन । चोर, डाँका, ठग, लुच्चा, गुण्डा, नाफाखोरीबाहेक अरूको संगतै गर्दैन । मान्यजन, बिद्वान्, प्रतिभावान्, क्षमतावन्, नैतिकवान्, इमानदार र अरूको भलो चिताउनेहरूलाई देखिसहँदैन ।’ म एकोहोरो बोलिरहेँ ।
बाजेले न सही थापे न केही भने । अघिजस्तै चिना हेर्दै दंग परेका पर्यै छन् बाजे त । हैन बाजेको खुस्क्यो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्यो मनमनै । मुखले चाहिँ केही भन्ने आँट आएन । म पनि चुप लागेर बसिदिएँ त्यसै ।
‘अनि अरू के–के गर्छ ? भन्दै जाऊ ।’ हँसिलो मुख लगाएर बाजेले फेरि सोधे ।
‘मेरो छोरो सधैँभरि समाजका घिनलाग्दा र गन्हाएका मान्छेहरूको नजिक बस्न मनपराउँछ । मादक पदार्थतिर निकै ध्यान दिन्छ । गर्नै नसकिने र हुनै नसक्ने काम गर्न सक्छु भनेर त्यसै त्यसै फलाकिरहन्छ । हातमा अलि कति पैसा नपरे बाबु, आमा, दिदी बहिनी, भान्जा, भान्जी, काका, काकी, मामा, माइज्यू र अन्य आफन्त समेतको पनि फिटिक्कै काम गर्दैन । कुटपिट गर्न गराउन पनि उत्तिकै खप्पिस छ । जेसुकै गल्ती गरे पनि त्यसको एउटै प्रमाणचाहिँ छाड्दैन । जति हप्काए पनि, गाली गरे पनि, सरापे पनि कुनै असर पर्दैन । म त आजित भइसकें बाजे ! लौ न केही उपाय बताइदिनोस् । यसको दिन, दशा र ग्रह इत्यादि बिग्रिएको भए सपार्नु पर्यो । मेरो त केहीसिप लाग्ला जस्तो छैन ।’ मैले अलि अलि आँसु झार्दै ज्योतिषी बाजेका दुवै खुट्टा समातेर भनेँ ।
बाजे केही बोलेनन् । खाली हाँसीमात्रै रहे । बाजेको चालामाला देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो । अघिपछि यी बाजे अरूका कुरा सुन्दै सुन्दैनथे । एकोहोरो फलाकेर हैरानै पार्थे । चुपचाप लागेर उनका कुरा सुनिदिएर बीच बीचमा सही थापेन भने बाजे सनक्क सन्किहाल्थे । ज्योतिष पनि यिनी नाम चलेकै ज्योतिष हुन् । यिनका घरमा राजनीतिज्ञ, उच्च तहका कर्मचारी, ब्यापारी, ठेकेदार, हुनेवाला मन्त्री प्रधानमन्त्रीजस्ता व्यक्तिहरूको घुँइचो नै लागेको हुन्छ । म त यिनको पुस्तैनी जजमान भएरमात्र आउन पाएको हुँ । नत्र हामी जस्ताले ज्योतिष बाजेका घरमा ढिम्किने आँट गर्नु बेकार नै हो ।
‘नआत्तिउ बाबु ! तिम्रो छोराको सबै कुरा ठीक छ । कहीँ कतै केही बिग्रेको छैन । मलाई यस्ता मानिसको चिना हेर्न साह्रै मजा लाग्छ ।’ मेरो छोराको चिनातिर हेरेर मुसुमुसु हाँस्दै भने बाजेले ।
‘होइन के कुरा गर्नुहुन्छ बाजे तपाईं ? मान्छेलाई कत्रो मर्का परेर आएको छ, तपाईं भने ठठ्ठामात्रै गर्ने ? मचाहिँ छोराको कतै केही ठीक देख्दिन । के गर्दा सुध्रिएला भनेर शरण पर्न आएको छु । तपाईं भने यस्ता बहुलठ्ठी कुरा गर्नुहुन्छ ।’ मैले खप्नै नसकेर अलि ठुलै स्वरमा कराएँ ।
‘ल सुन । तिम्रो छोराको दिन, दशा र ग्रह आदि अध्ययन गर्दा उसको भविष्य अति नै उज्ज्वल देखिन्छ । भविष्यमा केही बन्छ तिम्रो छोरो ।’ बाजेले पत्याउनै नसकिने कुरा गरेर मेरो मुखतिर हेरे ।
‘हैन ए बाजे ! के फुस्के फुस्के जस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईंले ? मेरो छोरो सद्दे कुरा भनेपछि कहिल्यै गर्दैन । आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी भनेपछि जति सम्झाए पनि र जति अथ्र्याए पनि ठ्याम्मै बुझ्दैन । आफ्नो कामबाहेक दुनियाँभरका अरू कुरा उसलाई थाहा हुन्छ । अरूले भनेका कुरा केही सुन्दैन । आफूलाई अलिकति फाइदा हुन्छ भन्ने देख्यो भने जतिसुकै मिल्ने साथी, नजिकैका नातेदार, छिमेकी जोसुकै भए पनि चटक्कै छोडिदिन्छ । अरूलाई जुधाएर र बझाएर फाइदा उठाउन उस्तै सिपालु छ । आफ्नो काम पर्यो भने ढोगेर, मागेर, छलेर, ढाँटेर, चोरेर भए पनि पूरा गर्छ । आफ्नो काम पूरा भएपछि कसैलाई फर्केर पनि हेर्दैन । यसरी पो म हैरान भएर बाजेकहाँ आएको त । यसबाट छोरालाई सुधार्ने केही उपाय सुझाइ दिनुपर्यो बाजे ।’ मैले हात जोड्दै भनेँ ।
‘बाबु ! तिमी चिन्ता नगर । मैले तिम्रो छोराको सम्पूर्ण कुरा हेरेँ । उसको लक्षणहरूबारे तिमीबाट पनि सुनेँ । तिमी सुर्ताउनु बेकार छ । उसका सारा लक्षण र भाग्य हेर्दा भविष्यमा ऊ ठूलै मान्छे बन्लाजस्तो देखिन्छ । अब तिमीसित लुकाएर के कुरा गर्नु । भविष्यमा तिमी सहायक वा राज्यमन्त्रीको बाबु त त्यसै हुन्छौ । उस्तै परे फूलमन्त्री कतै नजा । मन्त्रीसम्म त तिम्रो छोरा त्यसै पनि हुन्छ । हाम्रो गाउँको मान्छे पनि एकदिन अवश्य मन्त्री हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ । हाम्रो गाउँको नामचाहिँ तिम्रो छोराले राख्छ । अब ढुक्क भएर घर जाऊ । उसलाई सहयोग गर । त्यस्तो छोरो जन्माउने तिमी धन्य छौ ।’
ज्योतिष बाजेले मेरो छोराको चिना ओल्टाइपल्टाइ गर्दै के–के फलाके के–के । मैले त कुरै बुझिनँ ।